Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "mapenzi", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "mapenzi", iro shamwari manzwiro?
Mu "mapenzi" neizvi nzvimbo zvichireva
nyanzvi kufembera munzira
vachishandisa zvokushopera kuti kuzvitaurira 3500 Yen vakasununguka kadhi, zviri 0-fung kadhi kuti "mapenzi", vakakweverwa vafambi uye imbwa chena iwe. Sezvo munhu chete zvinofamba munhu makumi maviri Major Arcana of kadhi iri kadhi kuti yave wakavhomorwa, zvingava kutaura pamberi chinokosha kwazvo kadhi. Under mufambi ari chena zuva aipfeka chigure, ane shamhu unobatanidza chiduku mukwende kurudyi, kuruboshwe ane chena ruva, rakachengetedzwa wakavhomorwa sei kufamba Kusangana.
mirayiridzo kufamba pamusoro mufambi ari rava pamawere, sokunge vakaudza, ndiko kadhi kuti chena Imbwa kudzingirira shure. Pane pfungwa kuti nani kana kuipa pachangu nokukurumidza.
mapenzi anokumhan'arira manzwiro
kadhi iri zvakanaka nzvimbo Vanzveri kureva rinomirira raiita richizvitenda tsvakai chiito, akashinga, kana kadhi akabuda ari kwagara chinzvimbo, zvikuru akasununguka nguva nekuti vanoda kunakirwa sokuti shamwari chaidzo chinangwa. Kana vaviri ndinofunga vanhu, anokumhan'arira wako Uchanzwa coziness neukama pakati penyu, hazvina vanofunga zvakadai vakaroora asi. Sezvo
anoita kuda tikoshese kupedza nguva muri pamwe chete kupfuura, iwe zviri nani kudzivisa maitiro akadai kusunga vamwe mubato. Kana kuti vave uchikurukura nevamwe mubato iri wakachena manzwiro nguva ndakasangana kupfuura, unogona kudzamisa mamwe maviri vanhu ukama. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo, mumwe bato huchamiririra kuti hazvisi kuziva iwe sezvo vanhukadzi.
kuti ave chimbozviongorora sezvo vasikana kune pati, zvakakosha kutanga kuedza rinopikisa kuteterera kwavo pamberi. Nokuti mapenzi vanowanzotevedzera kuti ukwezvwe vanoshinga uye itsva pfungwa, nemumwe Ngatitaurei noushingi ichifambira to'd vanoti zviri ikoko kuva kunetseka pamusoro pako. Zvisinei, benzi nokuti vanovenga akasungwa, Usatambisa vakakomba akaramba ari.
_x000D Kurasa pfungwa anosvika _ zvino, zvinokosha kuita kusiya kunzwa. Kana iwe
benzi munhu imi mapenzi ari neizvi nzvimbo Vanzveri kureva akabuda ari neizvi chinzvimbo, imwe Pati fungwa haana kutsauka pano mamiriro. Zvose kana kunyange ndakafunga unotambudza, kana aenda asingashiviriri riri kurwadza mamiriro usingabereki kucheka nemavambo matsva. In shure kunyange kuda, handidi kuonekwa ari maitiro mutsva, ndinofunga kunyange kuda kugadzirisa nyaya zvikuru ukama. Kana
kana pane uchida kupona ukama nevamwe nebato, zviri nani yakaramba zvishoma kure pamwe anokumhan'arira. Kana uri kunetseka kuti kuisa daro nezvimwe bato nguva nenguva kuitira kuti kupa vanhu vakurukurirane, saka ndapota kuchengeta yakanyatsoti kufarira mumwe webato. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo hazvishandi sokuti kudanana newe. Sezvo zvichida pane oga kufarira mwana, zvingava nani kuti kufunga kuti hapana kufamba kweropa.